ဒီနေ့ Covid 19 ရောဂါ ဆေးစစ်ဆေးခဲ့ရာ Positive အဖြေထွက်ခဲ့တဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးမိုးဒီ – Shwe Sar
ဒီနေ့ Covid 19 ရောဂါ ဆေးစစ်ဆေးခဲ့ရာ Positive အဖြေထွက်ခဲ့တဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးမိုးဒီ
By Shwe SarPosted on November 22, 2020 November 22, 2020
ပရိသ တ်ကြီးရေ ဟာသလူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီကတော့ နေမကောင်းဖြစ်ရာကနေ ဆေးစစ်ဆေးခဲ့ရာ covid 19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင့် ဒီကနေ့မှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်face book page မှာ ကူးစက်ခံထားရကြောင်း ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ ဝေဠုကျော်ရဲ့facebook page မှာတော့”ဟာသ သရုပ်ဆောင် မိုးဒီ covid 19 positive အဖြေထွက်….
ဟာသ သရုပ်ဆောင် မိုးဒီ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က နေမကောင်းဖြစ်၍ ဒီနေ့တွင် ဧရာဝတီစင်တာ၌ ရောဂါသွားရောက်စစ်ရာတွင် positive အဖြေထွက်တယ်လို့ သိရှိရပါတ ယ်၊ ဟာ သ သရုပ်ဆောင် မိုးဒီ သည် လက်ရှိတွင် ဆီးချို၊ သွေးတိုး ၊နှလုံး ၊ ကျောက် ကပ် ရောဂါ ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်၊ ဟာသ သရုပ်ဆောင်မိုးဒီ ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အောက် ဆီ ဂျင် ရှုစရာမလိုဘဲ အသက်ရှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ဟာသလူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီက ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကို လက်ရှိမှာ ရပ်နားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကိုလည်း ရရှိထားပြီး အနုပ ညာေ လာကမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…ပရိသတ်တွေလည်း ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဟာသလူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီကို ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်အောင် ဆုမွန်ေ ကာင်းတောင်းပေးလိုက်ပါဦးနော်။
Photo Credit – Wai Lu Kyaw fb page
Source – Wai Lu Kyaw fb page
ပရိသ တျကွီးရေ ဟာသလူရှ ငျတျော ဦးမိုးဒီကတော့ နမေကော ငျးဖွဈရာကနေ ဆေးစဈဆေးခဲ့ရာ covid 19 ရောဂါကူးစကျခံထားရကွောငျ့ ဒီကနမှေ့ာ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ဝဠေု ကြျောface book page မှာ ကူးစကျခံထားရကွောငျး ဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ။ ဝဠေုကြျောရဲ့facebook page မှာတော့”ဟာသ သရုပျဆောငျ မိုးဒီ covid 19 positive အ ထှကျ….
ဟာသ သရုပျဆောငျ မိုးဒီ ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈရကျလောကျက နမေကောငျးဖွဈ၍ ဒီနတှေ့ငျ ဧရာဝတီစငျတာ၌ ရောဂါသှားရောကျစဈရာတှငျ positive အဖွထှေကျတယျလို့ သိရှိရ ပါ တ ယျ၊ ဟာ သ သရုပျဆောငျ မိုးဒီ သညျ လကျရှိတှငျ ဆီးခြို၊ သှေးတိုး ၊နှလုံး ၊ ကြောကျ ကပျ ရောဂါ ရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ၊ ဟာသ သရုပျဆောငျမိုးဒီ ရဲ့ လကျရှိအ ခွေ အနေ မှာ အောကျ ဆီ ဂငျြ ရှုစရာမလိုဘဲ အသကျရှုပိုငျးဆိုငျရာ ကောငျးမှနျလကျြရှိကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ” ဆိုပွီး ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။
ဟာသလူရှငျတျော ဦးမိုးဒီက ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ အနုပညာအလုပျတှကေို လကျရှိမှာ ရပျနားထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုကိုလညျး ရရှိထားပွီး အနုပ ညာေ လာကမှာ အောငျမွငျ မှုတှရေရှိခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကဲ…ပရိသတျတှလေညျး ကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျခံထားရတဲ့ ဟာသလူရှငျတျော ဦးမိုးဒီကို ကနျြးမာရေး ကော ငျးမှနျအောငျ ဆုမှနျေ ကာငျးတောငျးပေးလိုကျပါဦးနျော။
Previous post မိမိုက်ဂေါ်ထွက်နေတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ အလန်းစားပို့စ်တွေပေးကာ အထာကျကျလန်းနေတဲ့ ယုသန္တာတင်
Next post ကျစ်လစ် တောင့်တင်းပြီး အဆီပိုမရှိတဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရားတွေ ထုတ်ပြလိုက် ပြန်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ကိုဗစ်ကာလ ထိခိုက် နေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ အိမ်ခြံမြေ အဝယ်သင့် ဆုံး အချိန်ကာလ